Kufanele uzitholele wena, Konke okunye kungenziwa ku-Google! - ABCnakshatra
I-Horoscope yomuntu siqu enezibikezelo zeminyaka engama-20 (2022-2042)
Kufanele uzitholele wena,
Konke okunye kungenziwa ku-Google!
Thola ukufeza amathuba emisebenzi, ubudlelwano, ukuphathwa kwemali, amathiphu wokuba ngumzali, nokuningi ngosizo lwezinkanyezi.
Ukufundwa kwezinkanyezi kuyisayensi esetshenziselwe amakhulu eminyaka ukusiza abantu benze izinqumo ngezimpilo zabo.
Iqembu lethu lochwepheshe lisebenzisa ukubhula kwezinkanyezi kweVedic ukukunikeza ukufundwa nezeluleko ezinembile kakhulu.
Ungasebenzisa ukufundwa kwethu nezeluleko zokuthola ukugcwaliseka kwemisebenzi, ubudlelwano, amathiphu wokulawulwa kwemali, nokuningi.
Ukufundwa kwethu kususelwa ku-horoscope yakho ngakunye futhi kuhambelana ngqo nawe.
Umbiko wethu uzokunikeza imininingwane ngeshadi lakho lokuzalwa elinye ezinye izazi ezingeke lihlanganyele ekubonisaneni okufushane komuntu.
Yazi mayelana nekhono lakho leqiniso nokuthi ungawathola kanjani kulo.
Yazi ngezindawo zakho zamandla nobuthakathaka.
Funda ngezinselelo ozobhekana nazo empilweni nokuthi ungazinqoba kanjani.
Umbiko wethu ungabikezela ukubikezela kwakho Dasha 100% ngokunemba.
Thola i-horoscope yakho eyenziwe ngezifiso esekwe kuma-vedas, epanishads, kanye nezincwadi zokufunda izinkanyezi zasendulo zokubikezela okunembile.
Qondisisa uhlobo lobuntu bakho nendlela engcono kakhulu yokuthi uphile impilo.
Ungashiyi itshe elingashintshiwe ekufuneni kwakho ukuholwa.
Iqembu lethu lezinkanyezi le-Vedic Astrology lacwaninga ama-classics asendulo ukuba abahumushe olimini lwakho.
Ukufundwa kwezinkanyezi kweVedic nakho kungachaza uhlobo lwabangane ozoba nakho empilweni yakho, uhlobo lomlingani wempilo ozoba nalo, uhlobo lukanyoko ne-amp yakho; Ubaba, nokuthi ubudlelwane bakho buzoba kanjani nomkhwe wakho.
Izibikezelo zichazwa ngendlela eqondile.
Uzoqonda zonke izici zokufunda izinkanyezi ezihambelana nempilo yomuntu.
Thola umbono onemininingwane womlingani wakho womshado.
Thola incazelo eningiliziwe yozakwethu womshado.
Yazi ukuthi yini imvelo yabo izoba njani, umsebenzi wabo, kanye nemfundo yabo.
Qagela ukuthi uzoba nempilo yomshado ejabulisayo nephumelelayo noma cha.
Thola ikhambi lomshado & amp; ubudlelwane nombiko wethu.
Udinga nje ukufaka imininingwane yakho yokuzalwa ukuthola i-horoscope yakho.
Cha. Amakhasi: 300-350 (kuya nge-horoscope yakho)
Isikhathi Sokulethwa: Kungakapheli amahora angama-24-48 (Yonke imibiko iqinisekiswa ngababhula ngezinkanyezi zethu zeVedic)
Izindlela zokukhokha: I-PayPal, ikhadi lesikweletu, ikhadi le-Debit, i-Upi, I-Net Banking, njll.
Ukuhlaziywa okuhlanganisiwe kukaDasha &; Ukuhamba kunganikeza ukubikezela “Pin-Point”.
UDasha usenza siqonde ukuthi sithini izithelo esizongena esikhathini esithile, kanti ukuhamba kusitshela ukuthi izithelo zizohanjiswa nini kithi.
Kodwa-ke, thina e-ABC Nakshatra sizokunikeza ukuqonda okuphelele kwemiphumela yokuqagela ozothola kuma-dashas akho ngemuva kokuhlaziya ngokucophelela izici, izihlanganisi, namashadi okuhlukanisa, nezinye izici zeshadi lakho lokuzalwa.
Thuthukisa zonke izingxenye zobuntu bakho futhi uphile impilo engcono.
Uzothola incazelo ephelele yeMaha Dasha &; I-Antar Dasha yesikhathi sakho sonke. Ungaqinisekisa le miphumela yeDasha ngemicimbi yakho edlule, futhi uzomangaza ukwazi ubuqiniso besayensi yokufunda izinkanyezi ye-Vedic Astrology.
Futhi, thola izincazelo eziphelele ze-10 zokutolika okubalwa (ama-gochar) amakhompyutha ethu aphezulu asebenza ngokuphakelayo kwedatha ye-NASA, okubalwa ngokunembile ukunyakaza kwamaplanethi nezincazelo zazo ezithile eshadini le-10 elandelayo kanye nezethulo ze okufanayo.
Hlela impilo yakho ngeneminyaka engama-25,000 ubudala ukuhlakanipha kwasendulo kwasendulo ngekusasa lakho.
Ulwazi lwangaphambili lwezehlakalo ezibalulekile nesikhathi sokuthola usizo lusiza ukuhlela ukuhlela imicimbi yempilo, okwenza i-VEDIC Astrology ngendlela enhle ukubona ikusasa, ngokusekelwe kwisayensi yasendulo yasendulo yasendulo.
Amakhambi anciphisa ubukhulu bemiphumela emibi futhi anikeze impumuzo ezikhathini ezimnyama zokuphila. I-horoscope ka-Abc Nakshatra ifaka amakhandlela aphelele, imikhuleko, ama-mantras, isisa, amakhambi okuphulukisa, nemibala ethandwayo.
Siseshe yonke imithombo enokwenzeka yeTransit &; Ukutolika kweDasha kusuka ku-Vedas &; Ama-aspology afunda ama-astrology asendulo. Uthola okungcono kakhulu kokubili imihlaba: izincazelo eziyiqiniso, kepha ezethulwe ngendlela efinyeleleka kalula embikweni wethu we-Astrology.
? Ukuhlela i-2022 kulula kakhulu ngezibikezelo zanyangazokazi ezenziwa ngenyanga zezezimali zakho, ezempilo, ubudlelwano & umsebenzi. Thola amakhambi wamahhala wezinkanyezi & Izincomo ze-Gemstone ezifakiwe kulo mbiko. Inhloso yethu ukusabalalisa lolu lwazi lwakudala lwakudala oluneminyaka engu-25 000 lokufunda ngezinkanyezi lweVedic ASTICELY KULUNGILE kuwo wonke umuntu ngamanani ashibhile. Sithenjwa yizazi zezinkanyezi eziphezulu zamazwe omhlaba ukukhiqiza izinkanyezi zamakhasimende abo.
Isigaxa sethu se-horoscope yethu ye-premium sihlanganisa okulandelayo: –
✅I-300 Page Astrology Expoution & Iminyaka engama-20 yokubikezela horoscope.Kubandakanya konke kusuka kumibiko yempilo ye-Vedic Astrology ekufundeni izinkanyezi kwe-KP.
✅Ukuphela kokulungiswa kwezinkanyezi okuwukudingayo.Uzokwazi ukuphendula imibuzo esebenzayo efana nokuthi “lapho ibhizinisi lami lizophumelela?” Futhi “Ngabe ngizolidla ifa lemali eminyakeni embalwa ezayo?”
✅Thola kalula amakhambi amahle kakhulu kuwe nakubathandekayo bakho.Khulula ukucindezelwa nokukhathazeka ngokusebenzisa amakhambi eLal Kitab, owaziwa nangokuthi “Book Book of Vedic Astrology”.
✅Thola okuningi empilweni yakho ngonyaka ka-2022:Yazi ukuthi yiziphi izinyanga eziyi-12 ezizayo ezizoletha nombiko wokuhlaziya we-Transit / Dasha wonyaka we-Dasha futhi wenze impilo yakho ibe yinde futhi ijabule ngangokunokwenzeka.
✅I-Vedic Astrology yenze lula.Misa ukuchitha amahora amaningi ekucwaningweni kokubikezela kokubikezela ngokubikezela awukwazi ukukuqonda ngoba sikwenzele ukusebenza kanzima!
✅Musa nje ukuhamba nokugeleza.Thola ukuthi kuzokwenzekani ngaphambi kokuba kwenzeke! Thola ukubikezela kukaDasha kanye nalo lonke ulwazi mayelana ne-Nakshatra, Rashi, Bhava, Dasha & UDasha belikhulumi ngokuningiliziwe kanye namandla abo nobuthakathaka babo.
✅Thola umbiko wakho we-Numerology ufakiwe kulo mbiko.Yazi izinombolo zakho ze-Lucky, imibala enenhlanhla, i-auspicious & Izinsuku ezi-Inauspious & Iminyaka empilweni yakho, izinombolo zocingo, nezinombolo zemoto, ezikulethela ingcebo nokuchuma.
✅Thola izincomo ze-Gemstone ezifakiwe kulo mbiko.Umbiko wethu we-Horoscope ufaka incazelo eningilizayo yokuthi ungagqoka kanjani uhlobo ngalunye lwe-gem kahle, kanye nama-mantras noma iziteshi ezingasiza ukuthuthukisa amandla alo kakhulu!
✅Yonga isikhathi ngokwenza umbiko wakho owenzelwe umuntu kungakapheli amahora angama-24.Lo mbiko uza njengefayela le-PDF ongalifunda kunoma iyiphi idivaysi – ikhompyutha, ithebhulethi noma i-smartphone – ngokulula kwakho.
✅Izinsuku eziyi-7 isiqinisekiso sokubuyiselwa imali.Siyaqiniseka kakhulu kwisayensi yokufunda izinkanyezi – sinikeza isiqinisekiso semali esingemuva esiyi-100% uma uzwa sengathi lo mbiko awukutholanga nganoma iyiphi indlela.